सुशान्त सिंहको अन्तिम पोस्टमार्टम रिपोर्टमा के छ ? - Everest Dainik - News from Nepal
सुशान्त सिंहको अन्तिम पोस्टमार्टम रिपोर्टमा के छ ?
एजेन्सीः बलिउड अभिनेता सुशान्त सिंह राजपूतको अन्तिम पोस्टमार्टम रिपोर्ट मुम्बई प्रहरीलाई दिइएको छ ।
अस्पतालले दिएको रिपोर्टका अनुसार सुशान्तको मृत्यु स्वास फेर्न नपाएकाले भएको थियो । यो पोस्टमार्टम रिपोर्टमा भारतीय अस्पतालका पाँच चिकित्सकले हस्ताक्षर गरेको भारतीय मिडिया लाइभ हिन्दुस्तानमा उल्लेख गरिएको छ ।
याे पनि पढ्नुस टेलिभिजन अभिनेत्री सेजल शर्माले गरिन् आत्महत्या
यो रिपोर्टका अनुसार सुशान्तको मृत्यु एस्फिक्सियाका कारण भएको थियो । यसको अर्थ हो, सुशान्तको शरीरले अन्तिम समयमा अक्सिजन पाउन सकेको थिएन ।
तर, अझै पनि सुशान्तको मृत्युको कारण खुलाउने विसरा रिपोर्ट आइसकेको छैन । यो रिपोर्ट आएपछि सुशान्तको मृत्युबारे थप खुलासा हुने अनुमान गरिएको छ ।
सुशान्तको अन्तिम पोस्टमार्टम रिपोर्टमा चाहिँ यो आत्महत्या भएको खुलाइएको भारतीय मिडियाले जनाएका छन् ।